Football Khabar » नम्बर वान कोर्टुवाको शान : यसरी बने ‘जिरोबाट हिरो’ !
नम्बर वान कोर्टुवाको शान : यसरी बने ‘जिरोबाट हिरो’ !
स्पेनिस रियल मड्रिडका पहिलो रोजाइका गोलकिपर थिबाउट कार्टुवाका लागि सान्टियागो बेर्नाबेउमा सुरुआती सिजन ज्यादै खराब थियो । रियल टिम खराब अवस्थाबाट गुज्रिँदा उनको प्रदर्शन त्योभन्दा बढी खराब थियो । गत वर्ष इंग्लिस क्लब चेल्सीबाट रियलमा सरुवा भएका बेल्जियमका गोलकिपर कोर्टुवाको जति आलोचना भयो, त्योभन्दा उनी आफैं चरम निराशमा देखिए ।
कार्टुवा स्वयंले पटक–पटक आफूले राम्रो गर्न नसकिरहेको मात्रै स्वीकारेनन्, ‘केही समय फुटबल छाडेर विश्राम लिन मन लागेको’ भन्नेसम्मका निराशाजनक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
रियल आएपछि पहिलो रोजाइका गोलकिपर बनेका उनले अघिल्ला गोलकिपर केलर नाभासलाई प्रतिस्थापन गरिदिए । खेल्नै नपाएपछि नाभास रियल छाडेर फ्रेन्च क्लब पिएसजीतिर । पिएसजीमा नाभासले शानदार प्रदर्शन गरिरहँदा कोर्टुवा भने यता रियलमा त्यसबेला पनि झनै खराब हालतमा थिए ।
यतिसम्म कि, मिडियामा त कोर्टुवाको सरुवा रियलका लागि खराब साबित भएको भन्दै बाक्लै खबर आए भने समर्थकहरूले पनि ‘क्लबले पित्तललाई च्यापेर हिरा मिल्काएको’ भन्दै रियल बोर्डको चर्को आलोचना गरे । हुन पनि हो, त्यसबेला रियल साँच्चै खराब अवस्थामा थियो ।
तर, अहिले समय फेरिएको छ । उनै कोर्टुवा अहिले रियलको टोलीमा सबैभन्दा प्रमुख हतियार बनेका छन् । टिमको रक्षापंक्ति सम्हाल्ने जिम्मेवारीअन्तर्गत उनले गोलपोस्ट सम्हालिरहँदा अहिले तत्कालको घडीमा उनी युरोपको नम्बर वान गोलकिपरका रूपमा उभिएका छन् । यो उनको तथ्यांकले नै बोल्छ ।
सिजन २०१९–२० सुरु हुँदै गर्दा पनि कोर्टुवाले ठूलै सघंर्ष गर्नुपरेको थियो । रियलले पटक–पटक खराब नतिजाको सिकार हुँदा कोर्टुवाको प्रदर्शन पनि बिर्सनलायक थियो । रियल हारिरहँदा कोर्टुवा भने युरोपियन लिगमा सबैभन्दा कम खेलबाट सबैभन्दा बढी गोल खाने किपर थिए ।
तर, पछिल्ला १४ खेलको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कोर्टुवा रातारात ‘जिरोबाट हिरो’ बनेका छन् । उनले आफ्नो प्रदर्शनको स्तरमा रातारात अविश्वसनीय ढंगले कायापलट मात्रै गरेका छैनन्, उनकै उच्च प्रदर्शनका कारण रियल उत्कृष्ट लयमा फर्किएको छ । दृश्यमा रियल यो सिजन सबैखाले प्रतियोगितामा एक प्रमुख दाबेदार पनि बनेर आएको छ ।
युरोपकै नम्बर वान गोलकिपर !
पछिल्ला १४ खेलको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कोर्टुवा यतिबेला युरोपका नम्बर वान किपर हुन् । उनको तथ्यांकले नै यो देखाउँछ । उनले रियलका लागि सबैखाले प्रतियोगितामा खेलेका पछिल्ला १४ खेलमा १० खेलमा त क्लिन नै सिट राखेका छन, जुन युरोपियन टप–५ लिगमा अन्य कुनै पनि किपरको भन्दा बढी हो ।
रियल पछिल्ला १४ खेलमा लगातार अपराजित छ । सोक्रममा कोर्टुवाले १० खेलमा क्लिन सिट राख्दा मात्रै ५ गोल खाएका छन्, यो निकै शानदार तथ्यांक हो ।
साउदीमा हिरो बने कोर्टुवा
रियलले दुई दिनअघि साउदी अरेबियामा जारी सिजनको सुपर कपको उपाधि जित्यो । एथ्लेटिको मड्रिडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–१ ले हराउँदा कोर्टुवा नायक बने । उनी टुर्नामेन्टकै सर्वोत्कृष्ट गोलकिपर घोषित भए ।
कोर्टुवाले पेनाल्टी सुटआउटमा एक पेनाल्टी मात्रै रोकेनन्, सोही खेलमा तीन कठिन प्रहार रोकेर टिमलाई जोगाएका थिए । खेल सकिन ३० मिनेट थप समयको अन्तिम दुई मिनेट बाँकी छँदा पनि रियल गोल खानबाट मुस्किलले बचेको थियो, एथ्लेटिकोका अल्भारो मोराटाको प्रहार उनले निकै कठिन गरी बचाएपछि खेल पेनाल्टीमा धकेलिएको थियो ।
त्यत्ति मात्रै हैन, कोर्टुवा सुपर कपमा सबैभन्दा बल रोक्ने किपर पनि हुन् । प्रतियोगिताभरि रियलको पोस्टमा विपक्षी टिमले कूल ११ सर्ट टार्गेटमा हानेका थिए, जसमा कोर्टुवाले ९ सर्टमा शानदार बचाउ गरेका थिए । फाइनलमा उपाधि जितेपछि कोर्टुवाको तारिफ रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले मात्रै गरेनन्, एथ्लेटिकोका प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीले पनि खुलेर गर्न भ्याए ।
तथ्यांक तस्बिरमा हेरौं–
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७६, मंगलवार १०:४५